Otu esi etinye Nvidia 495.xx Beta ọkwọ ụgbọ ala na Debian 11 Bullseye - WebSetNet
Otu esi etinye Nvidia 495.xx Beta Drivers na Debian 11 Bullseye
October 26, 2021 October 26, 2021 by Jọshụa James
Nkebi 2. Wụnye Nvidia Beta Drivers
Nkuzi na-esonụ ga-akụziri gị ka ịwụnye Nvidia Beta Graphic ọkwọ ụgbọala kacha ọhụrụ maka Debian 11 Bullseye.
Nkuzi a na-eji nrụnye ọkọlọtọ ngwaahịa nke Debian 11 Bullseye & GNOME desktọpụ. Nke a nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ maka ndị ọrụ nwere njikwa ngosi ọzọ ma ọ bụ gburugburu desktọpụ, yabụ gbaa mbọ kwado faịlụ ọ bụla dị mkpa tupu ịmalite.
Ugbu a, na Nvidia 495 ọkwọ ụgbọ alas ka nọ na beta ma ha erubeghị ebe nchekwa gọọmentị ọ bụla n'oge ugbu a. Agbanyeghị, maka ndị na-anụ ọkụ n'obi ga-achọ ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala beta ma jiri aka ha mee ka ha dị ọhụrụ, usoro ndị a ga-enyere gị aka imezu ebumnuche a.
Ihe mbụ ị ga-ahụ na nrụnye ọhụrụ bụ ịwụnye 32-bit ndakọrịta. họrọ Ee or Mba ka ịga n'ihu na nhọrọ nwụnye ngwa ngwa na-esonụ.
Na-esote, ị ga-enweta ngwa ngwa ọzọ na-arịọ ka idobe ntọala ndabere maka nvidia-xconfig utility ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ka akụrụngwa hazie gị faịlụ na-akpaghị aka.
Nke a bụ nhọrọ, mana nhọrọ akwadoro maka nrụnye ọhụrụ ga-abụ Ee.
Otu esi etinye Nvidia 495.xx Beta Drivers na Linux Mint 20
2 echiche na "Otu esi etinye Nvidia 495.xx Beta ọkwọ ụgbọala na Debian 11 Bullseye"
November 14, 2021 na 10: 18 pm
+ Nke a bụ ezigbo nkuzi. Iwu ndị ahụ bụ otu ajị agba unix/linux olu siri ike ga-eji. Ma na a hard core full Command line mwepu su & sudo Commands.-Nke ahụ bụ otú m na-eme ya-ike isi style.
November 14, 2021 na 10: 35 pm
daalụ maka nzaghachi. ekele ya.